Tokyo Olympics set to refund almost one fifth of all tickets sold | Sports Travel News
Ikhaya » Iindaba Zohambo Lwezemidlalo » IiOlimpiki zaseTokyo zimiselwe ukubuyisela phantse isihlanu samatikiti athengisiweyo
IiOlimpiki zaseTokyo zimiselwe ukubuyisela phantse isihlanu samatikiti athengisiweyo
Imidlalo yeOlimpiki yaseTokyo Kwakucwangciselwe ukuba zenzeke ngehlobo lowe-2020, kodwa Covid-19 ubhubhane unyanzelise abaququzeleli beMidlalo ukuba bawunqumamise lo msitho. Amagosa eMidlalo afunga ukuba aza kuyibeka iMidlalo ngo-2021 nangona.
Kodwa ngoku iiOlimpiki zaseTokyo zinokujongana nethemba lezihlalo ezingenabantu kwiminyhadala ka-2021, nokuba abalandeli bayavunyelwa ukuba babekho kwimidlalo ehlelwe ngokutsha eJapan, phantse isinye kwisihlanu sazo zonke iintengiso ezithengisiweyo zibuyiselwe.
Nangona kunjalo, kubonakala ngathi ukuzithemba kwabaququzeleli akubuyiswanga ngabalandeli, ikomiti eququzelelayo yeOlimpiki ivuma uLwesine ukuba ukubuyiselwa imali kuye kwacelwa i-810,000 yeetikiti ezizizigidi ezingama-4.45 ezithengisiweyo-inani elilingana neepesenti ezili-18 zamatikiti athengisiweyo yeMidlalo.
Izicelo okanye ukubuyiselwa imali kufuneka kungeniswe ngoNovemba 2020 emva kokucwangciswa kweMidlalo, kwaye ukubuyiselwa kwemali kulungiselelwe ukuba kulungiswe ngoDisemba.
"Ngelixa siceba ukuphinda sithengise amatikiti abuyisiweyo, njani kwaye ayakuphinda athengiswe njani," utshilo abaququzeleli.
Ubume beMidlalo ngokubhekisele kubabukeli buhlala bungaqinisekanga, kungekho sigqibo siza kwenziwa malunga nabalandeli de kube sentwasahlobo yowama-2021.
Kuthetha ukuba kunokubakho ukungxama kwamatikiti kwabo banako ukuhamba nokuya, kodwa ukuba izithintelo zohambo zihlala ziqinile, kunye neenkxalabo malunga nokuhamba kwabantu kunye nokuhlangana kwabantu abaninzi, imidlalo ye-2021 inokudlala phambi kweendawo ezingenanto- okanye mhlawumbi hayi kwaphela.